Marina fa mety mahazo maro an’isa araka ny teniny Atoa Andry Rajoelina sy ny ekipany, saingy fandresena tsy marin-toerana tahaka ny tamin’ny fifidianana filoha. Nihena be ny mpandatsa-bato, ary rehefa halalinina, ireo nifidy ny kandidan’ny IRD ireo no heverina fa tena nifidy an-dRajoelina. Raha atao ny kajikajy, manome telo tapitrisa mahery amin’ny mpifidy 10 tapitrisa eo ny nandrotsa-bato nanerana ny Nosy. Mizara 3 ny vato amin’ny ankapobeny nanerana ny Nosy, ary tsy hitovy velively amin’ny vato azon-dRajoelina tamin’ny fifidianana filoha velively ny azon’ireo kandidany. Tsy tokony ho nisy fiovana be io raha ny lojika kokoa ho azy ireo fa ny mpifidy ny TIM na ny tsy miankina no tsy mahagaga raha nihena satria kivy tamin’ny hosoka sy hala-bato, ary io fa mbola miseho tokoa. Toa miseho ny tena marina, ary voaporofo ihany koa, nanomboka tany amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy ireo fifidianana rehetra nandeha fa tsy Antananarivo velively no nanongana an-dRavalomanana. Ny any amin’ny Faritra izay natao fitaovana efa manomboka mitroatra toa an’Ambilobe, izay nidinan’ny filoha matetika saingy mijoro sy manohitra ny fampandaniana amboletra ny olon-dRajoelina. Mandady ny trambo.